အာမင်ထောင့် တစ်ဦးကျော်ကြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် သြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ် ။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ခေါ်တော်မူခြင်း, သူနာမည်တက် လာ. သလဲ? ဇာစ်မြစ်ကိုပုံပြင်အာနိုး Palmer ကတစ်ဦးခန်းမ Fame ၏အားကစားသတင်း, jazz ဂီတသမားများနှင့်လမ်းပေါ်မှာ-ထောင့်တရားဟောဆရာပါဝငျသညျ။
'' အာမင်ထောင့်က '1958 မာစတာပြီးနောက် Named ခဲ့
"အာမထောင့်" ဒါကြောင့်အောက်ပါခြင်းခံခဲ့ရသည် 1958 မာစတာ အားကစားပုံဥပမာတစ်ခုဆောင်းပါးထဲမှာစာရေးဆရာဟားဘတ် Warren လေသည်။
ဒါကရှိရာမာစတာဖြစ်ခဲ့သည် အာနိုး Palmer က မိမိအရရှိခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံ ပင်ဆယ်စုနှစ်အကြာတွင်ကြောင်း, တစ်ဦးအာဏာရ၏အကူအညီဖြင့် ကဲန် Venturi နေဆဲစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
လေတိုက်နေသောကြောင့် Palmer ကအဆိုပါ 1958 ပြိုင်ပွဲ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်သူတို့အပေါက်တွေကစားထားတဲ့အတွက်အံ့မခန်းလမ်းပေါက်တွေ 11, 12 နဲ့ 13 ရန် monicker "အာထောင့်" ကိုပေး၏။
ဘယ်လို Palmer က '' အာမင်ထောင့် '' ၏လေရဲ့အသုံးပြုမှုတျသှငျး
တစ်ဦးမိုးရာသီညနပေိုငျးရှေ့တော်၌ထိုညဥ့်ပြီးနောက်ပြိုင်ပွဲပါဝင်သောဘောလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်များအတွက်ဒေသခံတစ်ဦးအုပ်ချုပ်မှုကိုချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ အဘယ်သူ၏ဘောလုံးကို embedded တတျနိုငျသ, အသစ်မွေးစားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်, ဓာတ်လှေကားနှင့်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘဲ drop တစ်ဦးကဂေါက်သီး။
သင်ကသိကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့နှင့်, ထိုစည်းမျဉ်းနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာချီ လာ. , ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးမှစပ်လျဉ်း။ အမှတ် 12 တွင်, Palmer ကယ့်ဘောလုံးကိုအစိမ်းရောင်နှင့်နောက်ကွယ်မှဘဏ်ထဲမှာ embedded ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အပေါက်ပေါ်တွင်တရားဝင်ဒေသခံစိုးမိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးခဲ့လျှင်, သူကအိပ်ကြအတိုင်းဘောလုံးကိုကစားခဲ့ Palmer ကပြောသည်။
ဒါ Palmer ကသူ့ရဲ့ embedded အနေအထားထဲကဘောလုံးကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကို double-bogey5သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့နောက်အဆိုပါအရာရှိကရဲ့အာဏာရငြင်းခုံသူသည်မူရင်း embedded အနေအထားအနီးတစ်စက္ကန့်ဘောလုံးကိုကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ဒုတိယအကြိမ်ဘောလုံးနှင့်အတူ3ဂိုး။ Venturi အမြဲ Palmer ကမူလဘောလုံးကိုတစ်စက္ကန့်ဘောလုံးကို drop ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကစားမတိုင်မီကြေညာဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ Palmer ကအမြဲသူရည်ရွယ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့တယျပြောဆိုထားသည်။
ယင်းအနေဖြင့်မည်သို့ပင်, အမာစတာက်ဘ်ဆိုက်ပြောပြတယ်, Palmer ကနှင့် Venturi ပြီးတော့ကစားဆက်လက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကော်မတီက အခြေအနေကလုံ့လဝိရိ:
ဘယ်အချိန်မှာသူက "ဒါဆိုလျှင်အဆိုပါကော်မတီတွင်ရေတွက်သင့်ပါတယ်။ အမှတ် 13 မှာကသူ့ရမှတ် 12 မှာဘာများတုန်းပဲမသေချာဂိုးသွင်းသောဒေသခံအုပ်ချုပ်မှုကိုသက်ဆိုင်သောခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ဖို့တောင်းခဲ့တယ်, Palmer ကရွှေလင်းတ 3. များအတွက် 18-ခြေလျင်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်နစ်မြုပ် အမှတ် 15 ကစားခြင်း, Palmer က 12 မှာမိမိတစ်စက်သင့်လျော်ခဲ့သည်နှင့်အပေါက်မှာမိမိရမှတ်သူ၏ပထမဦးဆုံးအဓိကအောင်ပွဲမှဦးဆောင်,3ခဲ့ကြောင်းကြားပြောလေ၏ခဲ့ပါတယ်။ "
လေတိုက်ရဲ့အားကစားဆိုင်ရာပုံဥပမာပြိုင်ပွဲဖော်ပြဆောင်းပါး, နှင့်ဂေါက်ကွင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ရပ်များ, ဤနည်းကစတင်ခဲ့သည်:
"နေ့လည်တွင်မကြာသေးမီကမာစတာဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲရဲ့ start မတိုင်မီတစ်ဦးထူး evocative အခမ်းအနားကိုသြဂတ်အမျိုးသားသင်တန်း၏အဝေးဆုံးလက်လှမ်းမမီမှာအရပျကိုလုယူ - Rae ရဲ့ Creek အဘိဓါန်အဆိုပါ Tee အနီး 13 fairway ဖြတ်ရှိရာအာမင်ထောင့်ထဲမှာချ, ထို့နောက်အရှေ့ဘက်မှုနဲ့အပြိုင် ရေတို 12 ရက်နေ့တွင်အစိမ်းရောင်၏အစွန်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် 11 အစိမ်းရောင်အတူ swirls ။ "
ထိုအစဉ်အဆက်ကတည်းက, ဂေါက်သီးနှင့်ဂေါက်ပရိတ်သတ်တွေ "အာထောင့်။ " သြဂတ်အမျိုးသားရဲ့ 11th, 12th နှင့် 13 တွင်းခေါ်ပြီ (တကယ်တော့လေတိုက် 11 အစိမျးရောငျသို့ရိုက်ချက်, အပြည့်အဝ 12th အပေါက်များနှင့်အဖြစ်အာမင်ထောင့်သတ်မှတ် Tee ရိုက်ချက် အမှတ်ပေါ်
13, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ 11, 12 နဲ့ 13 အပြည့်အဝသုံးပေါက်လမ်းပိုင်းနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထမ်းရောက်လာပြီ။ )
လေတိုက်နောက်ပိုင်းတွင်သူ Term '' အာမင်ထောင့် '' နှင့်အတူတက် လာ. ဘယ်လိုရှင်းလင်းချက်
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလေကြောင်းအမည်ဖြင့်အတူတက်လာခဲ့တာလဲ မိမိအလှုံ့ဆော်မှုဘာလဲ 1984 ခုနှစ်တွင်လေဂေါက် Digest မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုရှင်းပြချက်ရေးသားခဲ့သည်။ ကြောင်းဆောင်းပါးမှာတော့လေတိုက်နှုန်း wrote:
"ဆောင်းပါးထဲကအထင်ဖို့အချိန်များများနှင့်အတူငါစကားလုံး '' ထောင့် '' နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောထားသောစာပိုဒ်တိုများ ... ငါဝေဖန်အရေးယူရာအရပ်ကိုယူခဲ့သောရှိရာသင်တန်း၏ဝေးထောင့်အဘို့အခြို့သောသင့်လျော်သောအမည်ဖြင့်အတူတက်လာရန်ကြိုးစားသင့်ကြောင်းခံစားခဲ့ရ ငါဟောင်း Bluebird စံချိန်အပေါ်တစ်ဦးသီချင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည် (ဘောလုံးရဲ့လားထောင့် 'နှင့်ဘေ့စ်ဘောရဲ့ပူပြင်းတဲ့ထောင့်' 'ပြင်ပ) ၏ထင်နိုင်ဘူး။ "
လေရဲ့စိတ်ထဲသို့ရောက်လာသောသီချင်းကို "အာထောင့်" ဒါ ", ထိုအာမင်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Shoutin" 'ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်သူရေးသားခဲ့သည့်အကြောင်းကိုသြဂတ်အမျိုးသား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ကြောင်း, jazz သီချင်း၏စာရေးဆရာ "အာထောင့်" နဲ့ထလာခဲ့တာလဲ ဒါကနောက်ကျောနယူးယောက်စီးတီးရှိထားတဲ့လိပ်စာတတ်၏။ နှောင်းပိုင်းအစောပိုင်း / 19 20 ရာစုမှာတော့ကျမ်းစာအောက်ပိုင်းက New York မှာနေတဲ့တည်နေရာမှာကြီးမားတဲ့ပမာဏပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ တူညီသောဧရိယာပတ်လည်လမ်းဘေးတရားဟောဆရာ (ဤအရပ်မှသီချင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို) ထုတ်ကြီးတွေစည်းဝေးရာသို့ရောက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ဆုံးမစကားသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များအပြစ်တရားဆန့်ကျင်။
ပထမဦးဆုံးဒီမူရင်းဇာတ်လမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြသူကိုစာဖတ်သူက Chris Jenkins, ကထားသကဲ့သို့ "ဤမျှလောက်များစွာသော '' အာမင်! 'ရှိခဲ့သည် အသံတွေဟူသောဝေါဟာရကို '' အာမင်ထောင့် '' ပြောင်းလဲကြောင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုကြားမှတ်ချက်: ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျမ်းစာနှစ်ပေါင်းများစွာမိသားစုမှာခဲ့သည့်ရှင်းလင်းစွာအဖြစ် ... အာမင်ထောင့်, နယူးယောက်စီးတီးကမျြးစာကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့လိပ်စာ lists "။
"အာမထောင့်" ၏တစ်ဦးကခေတ်မီဘန်းစကားအသုံးပြုမှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတီထွင်ထားပါတယ်: အဆိုပါအသုံးအနှုန်းပြောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုတ်တယ်ယောက်ျား။ " ဒါကြောင့် "သူဌေးကဟုတ်တယ်ယောက်ျား၏တစည်းဝိုင်းရံလျက်ရှိသည်" "သူဌေးကတစ်ဦးအာမထောင့်ကဝိုင်း၏။ " ဖြစ်လာ
အလယ်ပိုင်း 1960 ခုနှစ်, ဝေလနယ်များတွင်မိတ်ဆွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်အာမင်ထောင့်ကအမည်ရှိသော။ အဆိုပါအုပ်စုသည်တီးဝိုင်းအပေါ်ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့စာမျက်နှာအရဗြိတိန်တွင်အချို့သောအသေးစား hits ခဲ့မသြဂတ်စအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပေမယ့်အဆိုပါအာမင်ထောင့်ကိုခေါ်ခဲ့တာဒေသခံတစ်ဦးကလပ်ထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကလပ်နီးပါးအကယ်စင်စစ်, jazz စံချိန်သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှာ-ထောင့်တရားဟောဆရာထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူ - အဆိုပါမာစတာသေးပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကို permeated ဘူး, တစ်ဦးဂေါက်သီးအခြေအနေတွင်ပြင်ပသောအချက်မှာ။
ယနေ့သော်လည်း, တကဂေါက်ကွင်းနှင့်နီးစပ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်သင်ဘားသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အာမင်ထောင့်အမည်ရှိသည်အခြားတည်နေရာကိုဖြတ်ပြီးပြေးဘယ်အချိန်မဆို, ထိုနာမကိုအမှီဖြစ်ကောင်းသြဂတ်အမျိုးသားရဲ့ 11th, 12th နှင့် 13 တွင်းခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
1955 မာစတာပြိုင်ပွဲ: နေ့စွဲမှအကြီးဆုံးမြို့အနိုင်ရ Margin
2020 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
PGA Tour အပေါ်တစ်ခုမှာက Round အတွက်အနည်းဆုံးကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်
1933 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား: နောက်ဆုံးကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်မှ Down
အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open Winners
PGA Tour Doral ပွင့်လင်း: ၎င်း၏သမိုင်းနှင့် Winners
အဆိုပါပန်းချီသမ္မတကတော်လိပ်ပြာ (Vanessa cardui) အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
ဒီဇိုင်း SAT ရေးသားခြင်းနှင့်ဘာသာစကားများစမ်းသပ်ခြင်း
အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် - အပိုဒ်ငါပုဒ်မ 10
တစ်ဦး Pickup Truck ကားအမြီးသို့မဟုတ်ဘရိတ်အလင်းမီးသီးအစားထိုးလုပ်နည်း
ဆာလဖာ Hexafluoride ဆန္ဒပြ
စကားပြောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း In-ယူ Turn
မြောက်အမေရိကဖလော်ရီဒါ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
ကျိန်ဆဲသို့မဟုတ် hex Breaking
Form အကဲဖြတ်3ရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလား Exit ကိုချော်
မြောက်အမေရိက၏ 10 အများစုမှာအရေးကြီးဒိုင်နိုဆော
Lyda Newman ကပေါကျကှဲဆံပင် Brush ကိုတီထွင်
နွေဦး Phenology နှင့် Global ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
Weighted ဂေါက်သီး Swing သင်တန်းပေး PowerStik
စစ်ပွဲစစ်ပြန် '' အကြိုက်ဆုံးစစ်ပွဲရုပ်ရှင်